Isicelo esingundoqo semagniziyam oxysulfide fireproof iphaneli Kukuvelisa ubushushu iphanelis.
Iphaneli yokugquma engacimi mlilo ye-Magnesium oxysulfide (eyaziwa ngokuba yipaneli yemagniziyam oxysulfide) yindawo ekhethekileyo yeepaneli zokucoca ngentsimbi. Yenziwe ngemagniziyam sulphate, nemagniziyam oxide kunye nezinye izinto, ngaplastikhi kwaye wabumba waphilisa. Luhlobo olutsha oluhlaza, oluhambelana nokusingqongileyo kunye nemveliso yokulondolozwa kobushushu. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo izinto umbala ipleyiti ngentsimbi, ine iingenelo engangenwa, manzi, yokugquma thermal, ukumelana flexural, ubushushu yokugquma, yokugquma isandi, ubunzima ukukhanya, kunye nenkangeleko ecocekileyo, leyo eyenza iziphene ezinye zokucoca umbala sentsimbi izinto ezingundoqo zepleyiti kwimarike, ezinje nge: Amandla, ukugoba ukuxhathisa, ukuthwala amandla, isiphumo sokugcina ubushushu, ngakumbi kufanelekile kwezinye iindonga zangaphakathi nezangaphandle zokwahlula kunye nophahla olunqunyanyisiweyo lwemimandla ethile.
Iimpawu zomsebenzi wepaneli yemagniziyam oxysulfide engacimiyo
1, ukuqina komoya
Iphaneli yeMagnesium oxysulfide yahlukile kwisamente yesiqhelo yasePortland ekubekeni nasekunyangeni. Yinto eqinisa umoya enesamente kwaye ayenzi lukhuni emanzini.
2, izinto ezininzi
Iphaneli yeMagnesium oxysulfide yinto enamacandelo amaninzi, kwaye icandelo elinye elitshiswe ngomgubo wokutshisa alunamandla emva kokuqaqanjelwa ngamanzi. Izinto zayo eziphambili ngumgubo otshiswe ngokukhanya kunye nemagnesium sulfate, kunye nezinye izinto zibandakanya amanzi, izinto zokuguqula kunye nokuzalisa.
3, ithambile kwaye ayonakalisi kwintsimbi
Iphaneli yeMagnesium oxysulfide isebenzisa i-magnesium sulfate njengearhente yokudibanisa. Xa kuthelekiswa nepaneli ye-magnesium oxychloride engenakucima umlilo, iphaneli yemagniziyam oxysulfide ayiqulathanga ion ye-chloride kwaye ayonakalisi kwintsimbi. Ke ngoko, iphaneli yemagniziyam oxysulfide inokuthi ithathe indawo yesamente ye-magnesium oxychloride kwaye isetyenziswe kwiipaneli zomnyango ongaphakathi kunye nangaphandle. Kwintsimi yepaneli yokugquma eludongeni, nciphisa umngcipheko obangelwa kukubola kwentsimbi zii-chloride ion.
4, amandla aphezulu
Amandla oxineneyo wepaneli yemagniziyam oxysulfide inokufikelela kwi-60MPa kwaye amandla e-flexural anokufikelela kwi-9MPa emva kokuguqulwa.
5, uzinzo lomoya kunye nokumelana nemozulu
Iphaneli yeMagnesium oxysulfide sisixhobo esomeleza umoya, esinokuqhubeka nokujija kwaye siqinise kuphela emoyeni, esinika uzinzo lomoya olungileyo. Emva kokuba iphaneli yemagniziyam oxysulfide iphilisiwe, okomisa umoya kwindalo esingqongileyo, uzinze ngakumbi. Uvavanyo lubonisa ukuba emoyeni owomileyo, amandla okunyanzelwa kunye nokumelana nokuguquguquka kwemveliso yeplanethi engacimiyo yomlilo ye-magnesium ekhulayo kunye nobudala, kwaye isonyuka de kube yiminyaka emibini kwaye izinzile.
6. Umkhuhlane ophantsi kunye nokubola okuphantsi
Ixabiso le-pH le-slurry filtrate yephaneli yemagniziyam oxysulfide iyatshintsha phakathi kwe-8 kunye ne-9.5, ekufutshane nokungathathi hlangothi, kwaye yonakalisa kakhulu ifayibha yeglasi kunye nefayibha yomthi. Wonke umntu uyazi ukuba iimveliso ze-GRC ziqiniswa ngeglasi yefayibha, kwaye iimveliso zefayibha ziyaqiniswa ngomgubo wamaplanga, isheyi yomthi, iindiza zekotoni, i-bagasse, i-peanut hulls, amakhoba erayisi, umgubo wentliziyo yengqolowa kunye nezinye iziqwengana zomthi, ngelixa iifayibha zeglasi kunye nemicu yomthi azinyangeki zealkali. Izinto eziphathekayo zisoyika kakhulu ukubola kwealkali. Baya kuphulukana namandla phantsi komhlwa ophezulu wealkali kwaye baphulukane nefuthe labo lokomeleza kwizinto zesamente. Ke ngoko, isamente eqhelekileyo ayinakunyanzeliswa ngeglasi yefayibha kunye nefayibha yomthi ngenxa yealkali ephezulu. Kwelinye icala, isamente yemagniziyam inezixhobo zayo ezahlukeneyo ezinesalikhi kwaye ibonakalisile izakhono zayo kwicandelo le-GRC kunye neemveliso zefayibha yezityalo.
7, ubunzima bokukhanya kunye nokuxinana okuphantsi
Ukuxinana kwepaneli yemagniziyam oxysulfide ngokubanzi yi-70% kuphela yeemveliso zesamente eziqhelekileyo ePortland. Ukuxinana kwemveliso ngokubanzi yi-1600 ~ 1800㎏ / m³, ngelixa ubuninzi beemveliso zesamente ngokubanzi zingama-2400 ~ 2500㎏ / m³. Ke ngoko, inoxinano olucacileyo kakhulu.
Egqithileyo Iphaneli yegumbi elicocekileyo elenziwe ngezandla lenziwe ngezandla
Okulandelayo: Iphaneli yegumbi elicocekileyo ledwala
Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi, Inkqubo yaManzi aBandayo, Igumbi lokucoca umoya ococekileyo, Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Igumbi elicocekileyo, Ifestile yegumbi elicocekileyo,